Nnwom 48 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Sion yɛ Ɔhenkɛse no kurow
Kurow a ɛma asaase sofo nyinaa ani gye (2)
Monhwɛ kurow no ne n’abannennen (11-13)
Dwom. Kora mma dwom.+ 48 Yehowa yɛ kɛse, na ɔfata ayeyi paaWɔ yɛn Nyankopɔn kurow mu, wɔ ne bepɔw kronkron no so. 2 Bepɔw so kurow fɛfɛ, nea ɛma asaase sofo nyinaa ani gye,+Ɛno ne Sion Bepɔw a ɛwɔ atifi fam noho,Ɔhenkɛse no kurow no.+ 3 Kurow no abannennen mu no,Onyankopɔn ada ne ho adi sɛ ɔyɛ guankɔbea.*+ 4 Hwɛ! Ahemfo ahyiam,*Wɔabom yuu rekɔ wɔn anim. 5 Wohui no, wɔn ho dwiriw wɔn. Wɔbɔɔ hu na wɔde ahopopo guanee. 6 Wɔn ho wosowee biribiribiri wɔ hɔ,Wɔn ho yeraw wɔn te sɛ ɔbea a ɔrewo. 7 Wode apuei mframa sɛe Tarsis po so ahyɛn. 8 Nea yɛate no, afei de yɛde yɛn ani ahuWɔ asafo Yehowa kurow, yɛn Nyankopɔn kurow no mu. Onyankopɔn bɛma kurow yi atim hɔ daa.+ (Sela) 9 O Onyankopɔn, yedwinnwen wo dɔ a enni huammɔ no ho+Wɔ w’asɔrefi hɔ. 10 O Onyankopɔn, sɛnea wo din kodu asaase ano noho no,+Saa ara na w’ayeyi nso kodu asaase ano noho. Trenee ahyɛ wo nsa nifa ma.+ 11 Ma Sion Bepɔw+ nni ahurusi;W’atemmu nti, ma Yuda nkurow* ani nnye.+ 12 Muntwa Sion ho nhyia; momfa ho nyinaa nhyia.Monkan n’abantenten.+ 13 Momfa mo ani nsi n’akoban* no so,+ Monhwɛ n’abannennen,Na moatumi aka akyerɛ nkyirimma. 14 Na Onyankopɔn a ɔyɛɛ eyi nyinaa no ne yɛn Nyankopɔn+ daa daa. Ɔno na ɔbɛkyerɛ yɛn kwan daa nyinaa.*+
^ Anaa “ɔyɛ abantenten.”
^ Anaa “ayɛ nhyehyɛe ahyia.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “de akosi owu mu.”